Fact check – MySansar
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर उम्मेदवार सुनीता डंगोलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको समाचार आज धेरै वटा अनलाइन मिडियाहरुमा आएका छन्। ती सबै अनलाइन मिडियाहरुले परेको उजुरीका आधारमा मात्र समाचार बनाएको देखिएको छ। चुनावको अगाडि ती समाचारहरु यसरी आएको छ, मानौँ उजुरी नै प्रमाणित भएर अख्तियारले छानबिन गरेर दोषीसमेत ठहर गरिसक्यो। खास कुरा के हो भनेर… Continue reading
मन्त्री र सचिवलाई गाली गरिएको एउटा पोस्ट अहिले फेसबुकमा भाइरल भएको छ जसमा लेखिएको छ, ‘मरी मरी पढेर डाक्टर बन्यो,स्थायी बन्न दशतिर चाकरी ठोक्नुपर्छ, करारमा बसेर काम गर्‍यो, अनि साँचो बोल्यो भनेर चोरेर बीए पास गर्ने मन्त्रीले थर्काउँछ, नेपाली घोकेर सचिव बन्नेहरुले पेल्छन्, अनि कोही कसरी नेपालमा टिकुन्।’ पोस्टमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका… Continue reading
पुलिसकै सूचना ‘फेक’ हान्दिएछन्, मिडियासमेत यसरी झुक्कियो
Posted on March 12, 2022 by Salokya
नेपाल प्रहरीले आसन्न निर्वाचनको लागि १ लाख १८ हजार जना म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलेको दावी गरिएको एउटा सूचना बुधबार (९ मार्च २०२२) देखि नै सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो। बिहीबार त्यो अझ फैलियो र अनलाइन मिडियामा समेत योबारे समाचार आयो। बिहीबार अपराह्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसको खण्डन गर्दै ‘हालसम्म त्यस्तो सूचना प्रकाशित/प्रसारित नगरिएको’ जानकारी दियो। हाम्रो… Continue reading
के साँच्चै युक्रेनी सेनामा भर्ती भएर लड्छु भनेका व्यक्ति नेपाली नै हुन्? बल्ल पत्ता लाग्यो
Posted on March 7, 2022 March 7, 2022 by Salokya
सामाजिक सञ्जालमा बुधबारदेखि एउटा भिडियो खुबै भाइरल भयो, जसमा आफूलाई नेपाली बताउने एक युवक युक्रेनको रक्षाका लागि सेनामा भर्ती हुन आएको बताउँछन्। प्रताप बस्नेत नाम बताउने ती युवकले अङ्ग्रेजीमा बोलेको र युक्रेनी भाषाको सबटाइटल रहेको सोही भिडियोकै आधारमा विभिन्न अनलाइनहरुले पनि समाचार बनाएका छन्। केही अनलाइनहरुले भिडियोमा नेपाली सबटाइटल समेत राखेका छन्। तर ती अनलाइनहरुले… Continue reading
घटना र विचार साप्ताहिक तथा अनलाइनका प्रधान सम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठीले ‘यस्तो हुन्छ माफियातन्त्र !‘ शीर्षकको लेखमा नेपालीले दुई वटा एसियाली र केही अफ्रिकी देशमा मात्र अराइभल भिसा पाउने दावी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्- ‘भियतनाम, श्रीलंका र केही अफ्रिकीबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा नेपालीलाई अराइवल भिसाको सुविधा छैन।’ के उनको दावी सही हो ? हामीले… Continue reading
बाइक वा स्कूटर चढ्ने दुवैले हेल्मेट लगाउनु पर्ने नयाँ नियम सरकारले अब ऐनमा नै व्यवस्था गरेर लागू गर्न लाग्यो। के तपाईँले पनि यस्तो समाचार कुनै अनलाइनमा वा कुनै टिभीमा वा सोसल मिडियामा देख्नुभएको थियो? देख्नुभएको थियो भने ती समाचार भ्रामक छन्। ऐनमा नभएर यो व्यवस्था लागू नभएको होइन। समाचार लेख्नेहरुले ऐन नै पढेनछन्। ऐन नै… Continue reading
आइतबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वकै महँगो साबुन प्रयोग गरेको दावीसहितका केही पोस्टहरु एकदमै भाइरल भए। त्यसमा गरिएका दावी अनुसार सुन र हीराको धूलो अनि मह प्रयोग गरी बनाइएको यो साबुन एउटाकै १२ सय डलर पर्छ रे। यो कुरा फैलाउनमा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायसमेत लागे। अनि केही अनलाइनले यस विषयमा लेखेका छन्। यसबारे… Continue reading
समाचार आयो- सगरमाथाको फेदीमा इटालीका राजकुमार, इटालीमा राजा नै छैन कसरी राजकुमार?
Posted on September 30, 2021 by Salokya
तपाईँले पनि केही दिनअघि नेपाली अनलाइन मिडियाहरुले माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवेका समाचारहरुमा इटालीका राजकुमार पनि सहभागी भएको पढ्नुभएको होला। अझ कुनै समाचारमा त नेदरल्यान्डसकी राजकुमारी पनि सहभागी भएको लेखिएको छ। एउटा मात्र हैन धेरै वटा मिडियामा अनि ससाना कपिपेस्ट मिडियामा होइन, नाम चलेकै मिडियाहरुमा त्यस्ता समाचार पढ्दा हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर नेपालफ्याक्टचेकको… Continue reading